သင်၏စကားဝှက် (သို့) PIN နံပါတ်ပျောက်ဆုံးလျှင်သင်၏ Samsung မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်ရယူနည်း။ | Androidsis
သင်၏စကားဝှက် (သို့) PIN နံပါတ်ကိုသင်မေ့သွားရင်သင့် Samsung မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်ရယူနည်း
Elvis bucatariu | | Android ထုတ်ကုန်များ, လဲ tutorial
သင်၏ Android ကိရိယာ၏စကားဝှက်သို့မဟုတ် PIN နံပါတ်ကိုသင်မေ့သွားပါကသင်အလွန်စိတ်ပူစရာမလိုပါ မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာ Samsung အမှတ်တံဆိပ်မှဖြစ်ရင်.
သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ရယူရန်သင်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် un ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ နှင့်သင်၏ Samsung အကောင့်။ ဤအရာနှစ်ခုဖြင့်သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအချိန်မရွေးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Samsung အကောင့်ကိုအသုံးပြုပြီး Android သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်နည်း
မသန်စွမ်း သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကို Samsung အကောင့်မှပြန်လည်ရယူနိုင်သည်, သင်ရှာရန်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်း (သို့) ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်း Samsung ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုရမည်။ သင်၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင်၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် သင့်စက်၏တည်နေရာအတိအကျကိုဖော်ပြပါ မြေပုံပေါ်မှာတောင်မှအသံထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပိတ်လိုက်ပါ ဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ် ဝေးလံခေါင်ဖျားပုံစံ.
ပထမ ဦး စွာ web browser ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် Find My Mobile ဝန်ဆောင်မှုကိုသွားပါ Samsung မှ သင်၏ Samsung အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ပါက၊ သင်၏မိုဘိုင်းကိုရှာဖွေရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်.
ညာဘက်မှာတွေ့ရတဲ့မီနူးမှာ၊ More ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Unlock option သို့ scroll လုပ်ပါ / သော့ဖွင့်ရန်။ ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ Samsung အကောင့်အတွက်စကားဝှက်ရေးထည့်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ ၀ င်းဒိုးငယ်တခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။
စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက် သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုအဝေးမှသော့ဖွင့်လိမ့်မယ် နှင့်သင်ယခင်ကရှိခဲ့သောမည်သည့်စကားဝှက်သို့မဟုတ် PIN ကိုမဆိုသင်၏စက်မှဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ အခြား Android ထုတ်ကုန်များတွင်ဤရွေးစရာမရှိပါ။ သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်ရှိအချက်အလက်အားလုံးကိုအဝေးမှ အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်သည် Android Device Managerဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမပေးသေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Samsung မှလွဲ၍ အခြား Android terminal တစ်ခုတွင်သင်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပါက Android Device Manager ကိုအသုံးပြုရမည် သင့်ဖုန်းကိုစက်ရုံ setting သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » သင်၏စကားဝှက် (သို့) PIN နံပါတ်ကိုသင်မေ့သွားရင်သင့် Samsung မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်ရယူနည်း
ပိုကီမွန် GO သည်မကြာမီသမဝါယမ multiplayer mode ကိုထုတ်တော့မည်
Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Pixel Rom, Deep Sleep သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်